धर्नाको विकट बस्ती बसेरी खोलामा स्वास्थ्य शिविर – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / धर्नाको विकट बस्ती बसेरी खोलामा स्वास्थ्य शिविर
धर्नाको विकट बस्ती बसेरी खोलामा स्वास्थ्य शिविर
दाङ,७ चैत । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ को विकट बस्ती बसेरी खोलामा स्वास्थ्य शिविर गरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ वडा कार्यालयको आयोजनामा तथा स्वास्थ्यचौकी धर्नाको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य शिविर गरिएको हो । स्वास्थ्य शिविरमा स्थानीय ६७ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए । स्वास्थ्य शिविरमा ज्वरो आउने, टाउको , पेट दु.ख, महिलाहरुको सेतोपानी बग्ने, तल्लो पेट दु.ख,घाँउ चोट पटकलगायतका विभिन्न प्रकारका विरामीहरुको स्वास्थ्य शिविरमा उपचार गरिएको स्वास्थ्यचौकी धर्नाका इन्चार्ज सिता डिसीले जानकारी दिइन ।
Previous: दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट सेवा सुरु
Next: दाङसहित तराईमा आज होली मनाइँदै